Naya Drishti | सल्यानमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान सुरु, डा. दिक्षान्त मेहता द्वारा खोप लगाएर उद्घाटन - Naya Drishti सल्यानमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान सुरु, डा. दिक्षान्त मेहता द्वारा खोप लगाएर उद्घाटन - Naya Drishti
सल्यानमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान सुरु, डा. दिक्षान्त मेहता द्वारा खोप लगाएर उद्घाटन
माघ १४, सल्यान । सल्यानमा काेभिड १९ काे विरुद्धको ११ सय डाेज खाेप आएकाे छ । बुधबारबाट देशभर कोभिड १९ खोप अभियान अन्तरगत सल्यानमा १ सय १० भाइल अर्थात ११ सय डाेज खाेप भित्रिएकाे हाे ।
एउटा भाइलमा १० डाेज हुन्छन् । एउटा भाइल खाेलिसकेपछि त्यसभित्रकाे डाेज ६ घण्टा भित्र लगाइसक्नु पर्ने हुन्छ। सल्यानमा पहिलाे खाेप जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डा. दिक्षान्त मेहताले लगाएर उद्घाटन गरेका हुन् ।
खोप अभियानका पहिलो दिन ३० जना स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी थलराज डिसीले बताए । उनकाअनुसार पहिलाेदिन बुधबार सल्यान जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत १७ महिला र १३ पुरुष गरी ३० जना स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएका छन ।
पहिलो चरणमा अस्पतालमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, शव वहान चालक, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाईकर्मी र ७५ वर्ष उमेर नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार आज पहिलो दिन चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको उनको भनाई छ ।
बिहिबारदेखि खोप लगाउनेको संख्यामा वृद्धि आउने कार्यालयले जनाएको छ । बिहिबार महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले खोप लगाउने डिसीले बताए ।
सल्यानमा काेभिड -१९ विरुद्ध दोस्रो डाेज खोप लगाएका एक व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण
शिक्षक र विद्यार्थीलाई कोरोना खोप लगाउनुपर्ने लगाएत माग राखेर सल्यानका शिक्षकहरू आन्दाेलित